Ama-SA under-19s alungiselela uhambo lesivivinyo kodwa olujabulisayo lwe-UK tour
Amalungiselelo aqhubeke kahle futhi asezophela kuma-Coca-Cola South Africa under-19s, abahlanganele ePitoli esontweni labo lokugcina kwikhempu ngaphambi kohambo oluya e-United Kingdom. Umqeqeshi u-Lawrence Mahatlane neqembu lakhe bazodlala ne-England kwi-Youth Test ne-One-Day International (ODI) series ngo-08-29 July.
“Abafana bebelungile,” kusho u-Mahatlane. “Bonke bafike beqinile. Besibahle sihlangene lapha kusukela ngoMgqibelo futhi bakwazile ukuphasa obekudingekile kwi-fitness.”
“Ngenxa yesimo ezweni (ubusika) nokungakwazi ukuba nama-turf facilities, sibusisiwe ukufika (e-Powerade) Centre of Excellence kanye nokuthola ama-facilities asezingeni,” enezezela.
NgoLwesibili, ama-under-19s aqhubekile namalungiselelo ngesikhathi eqala umdlalo wabo wezinsuku ezintathu wamalungiselelo bedlala neqembu le-Northerns Senior Provincial e-Groenkloof Oval. u-Mahatlane ukholwa ukuthi lomdlalo inselelo elungile yokuthi iqembu lakhe lidlale neqembu elinamandla kanye nokwakha incindezi abayilindele kwi-England.
“Uma ubheka emhlabeni ukuhamba kwekhilikithi yama-U19, abadlali abaningi badlala ikhilikithi ye-First Class,” esho.
“Iqembu le-England, abadlali badlala i-Second XI noma i-County Cricket. Ngakho, lokhu kuhle ukunika abadlali ithuba lokudlala nabadlali be-senior provincial lapho okukhona incindezi, okuhlukile kunekhilikithi yesikole,” enezezela u-Mahatlane.
Bambalwa abadlali kwiqembu labangu-15 abadlale ikhilikithi yebhola elibomvu, u-Mahatlane nabanye abaqeqeshayo babheke ukusebenzela amakhono abadlali kwikhilikithi ende.
“Bahlanu abadlali kulaba abangu-15 badlala ikhilikithi yezinsuku ezintathu noma ezine kumqhudelwano noma umdlalo,” esho. “Ukufundisa abantu ukudlala ikhilikithi yezinsuku ezine, ukudlala ikhilikithi yesikhathi, ukuphosa nokushaya usuku lonke, bekubalulekile.”
“Ngakho, ukugxila kwethu okubalulekile kulezinsuku ezinhlanu ezidlulile kube amakhono ebhola elibomvu,” evala.
Ama-SA U19s azodlala neqembu lamaNgisi kwimidlalo embili yezinsuku ezine ze-Youth Test nama-ODI amathathu futhi u-Mahatlane ukholwa ukuthi abadlali abakhethiwe bazoba nempumelelo futhi nokujabulisa izwe labo.
“Uma sishiya izwe, sibheke ukunqoba kuwona womabili ama-series,” kusho u-Mahatlane. “Sithembe ukuqhudelana. Bona (i-England) baphakathi nendawo ne-season yabo, thina siphakathi nendawo ne-off-season yethu ngakho kubalulekile ukuthi siqine kwikhilikithi, ngokushesha futhi siyekhona siqhudelane nabo,” esho evala.
Oshaya phezulu, u-Wandile Makwetu uya kwi-tour yakhe yokuqala njengokapteni weqembu lezwe emuva kokuqokwa ngo-May kulonyaka. Uyena ozoba nesipiliyoni esiningi eqenjini njengoba adlala kuma-ICC U19 World Cups amabili futhi wadlala kuma-Youth One-Day Internationals amabili nama-Youth Test amabili.
“Eyodwa yamakhempu amahle le,” kusho u-Makwetu. “Bekujabulisa kakhulu. Abafana bafike belungiselele, wonke umuntu ubukeka eqinile futhi kulezinsuku ezintathu ezizayo kwikhempu zizobe zibalulekile kithina njengoba sizama ukulola amakhono ethu.”
“Amalungiselelo kwikhempu ahambelana kahle ne-England futhi wonke umuntu ukulindele,” esho evala.
u-Wandile Makwetu uzoba ukapteni we-SA U19s e-England u-Van Tonder ungaphambili kwabe-SA abathathu kwi-ICC U19 World Cup Select XI Ama-SA U19s ayiqeda kahle i-World Cup Ukuqhuba okokugcina kuma-SA U19s Ama-SA U19s abuyekahle ngokunqoba i-Pakistan idlulela kwi-ICC U19 World Cup semi-final i-New Zealand ihlula i-South Africa U19s nokho u-Rolfes ethole ikhulu Ama-SA U19s afuna ukuqhubeka “nezikhathi eziguqula umdlalo” Ama-SA U19s adlulela kwi-U19 World Cup Super League Ikhulu lika-Van Tonder lihlelela ama-SA U19s ukunqoba umdlalo wokuqala we-World Cup i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup